General nke Ọnọdụ nke Jiri - Rikoooo
General nke Ọnọdụ nke Jiri nke Rikoooo.com
Ikpeazụ gbanwetụrụ na 16 / 01 / 2017
Ndị a Okwu-eji akọwa ọnọdụ n'okpuru nke weebụsaịtị Rikoooo.com awade ohere ya ọrụ. Site na ịdenye na Rikoooo.com, ị na akwado ịnabata niile stipulations ndị a General nke Ọnọdụ nke Jiri. Ọ bụrụ na ị na-ekweta na a Usoro na ọnọdụ, ị nwere ike ọ gaghị eji ọrụ anyị.
Rikoooo Akwụkwọ Akụkọ
Nke a na ọrụ notifies gị mgbe ọ bụla a ọhụrụ faịlụ dị maka nbudata na ozi dị mkpa. Your email address na-adịghị-ebute site ná bụla ọzọ na-anọgide nditịm nzuzo. Ị nwere ike mgbe ọ bụla gbanwee ma kagbuo na ndenye aha gị gị so ebe ma ọ bụ na ala nke ọ bụla email natara.
Gị Iji òtù Area
Iji nweta gị so na mpaghara, ị nwere nchọpụta na a paswọọdụ ị na-ekpebisi ike onwe gị mgbe ị batara ya. Bụrụ na nke ọnwụ nke ndị a aha njirimara na paswọọdụ, ị nwere ike ngwa ngwa ahụ ha na saịtị Rikoooo.com site na ịpị njikọ nke di na mpaghara nke njirimara:
Ị ga-ahụ ga-zigara email nwere paswọọdụ gị.
Dị na iwu "Informatique et Liberté" nke 6 January 1978, ị nwere ikike na-nweta, gbanwee, dozie ma hichapụ data banyere gị.
Ime ihe a nri atọ ngwọta ruru gị.
- Abanye na gị "Member Area"Na-eme mgbanwe ndị online.
- Kpọtụrụ onye Webmaster
- Send a na-atụ aro leta Rikoooo.com 107 chemin gaillard du n'ọdụ ụgbọ mmiri 31410 Noé - France
Rikoooo.com undertakes iji niile pụtara mkpa iji hụ na ihe kasị mma ga ndokwa nke ọrụ ọ na-enye aka Internet ọrụ. Ọ nwere ike ghara ẹkenịmde dara iwu na ihe omume nke ike ka ike ma ọ bụ de facto n'ofè ya akara, akpan akpan na ihe omume nke ihe nkwụsị nke ọrụ n'ihi a ọdịda nke ekwentị netwọk ma ọ bụ onye internet ohere na-eweta nke Internet ọrụ ma ọ bụ An update nke saịtị components ma ọ bụ na sava weebụ.
Rikoooo.com bụ bụghị maka ojiji nke a na-mere site onye ọrụ nke ozi na ọrụ dị na saịtị.